Momba anay - China Beihai Fiberglass Co., Ltd.
China Beihai Fiberglass Co., Ltd. dia manana orinasa 3 misy mpiasa 2100 manokana amin'ny famokarana vokatra Fiberglass any Shina. Mamokatra rojo vy E-Glass sy S-Glass izahay, kofehy voatetika, tsihy mitohy, kombo voaisy kofehy, lamba multiaxial, vovoka ary emulsion voatetika strand mat, woven roving, tissue mat ary vokatra FRP (plastika nohamafisina fiberglass) toy ny varavarana FRP, vilany voninkazo FRP, sary sokitra FRP sns.
Indrindra, i Shina Beihai dia manana ny teknolojia fototra an-tsarimihetsika momba ny lafaoro lehibe E-Glass ary ny tsipika famokarana 3 (ny sakany 1600mm, 2600mm ary 3200mm) amin'ny famokarana kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny fiberglass ary 120 fitaovam-panenomana ho an'ny famokarana roving vita amin'ny volo.
Ny vokatra isan-taona an'ny fiberglass roving dia mahatratra 380.000 taonina ary fiberglass voatetika strand mat 66,000 taonina ary fiberglass tenona roving 33.000 taonina.
Orinasa 1.3 misy mpiasa 2100 manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana vokatra fiberglass.
2.Mihoatra ny 10 taona ny traikefa misy sokajy vokatra mihoatra ny 18 izay afaka manome serivisy fijanonana tokana.
3.3 ny tsipika famokarana sy ny fitaovana fanenomana 120 izay manome vokatra azo antoka mba hahafahantsika miantoka ny fandefasana ara-potoana sy haingana.
4.A ny vokatrao rehetra misy fari-pahaizana momba ny kalitao iraisam-pirenena, aondrana any Azia atsimo atsinanana, afovoany atsinanana, Eropa atsinanana, amerika atsimo, amerika avaratra ary tsena lehibe hafa any ivelany.
Ekipa 5.R & D sy teknolojia mandroso mba hanomezana vokatra mahomby amin'ny karazana vokatra mahazatra sy vokatra namboarina.
6.Manana departemanta kalitao manokana izahay hahazoana antoka fa tsy misy olana kalitao alohan'ny fanaterana.
7.Export dia efa ho folo taona teo ho eo ny tantara, nanangona traikefa manan-karena ary mahazatra ny taratasy fanamarinana fanadihadiana sy ny fanondranana izay manome anao serivisy fanondranana matihanina。
8.Mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa endrika fandoavam-bola miovaova sy isan-karazany. Toy ny L / C, T / T, Western union, paypal, sns.
9.24-ora an-tserasera mialoha ny varotra sy serivisy aorian'ny fivarotana hanomezana anao valiny matihanina sy ara-potoana.
Ny orinasa dia manokana amin'ny famokarana fitaovana avo lenta, hery ara-teknika matanjaka, fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka, serivisy teknika tsara.